Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday ny 02/11/2017
Inty sy Nday ny 02/11/2017
Inona no sazin’izay nanao fahadisoana ?
Nivoaka tao anatin’ny fahanginany ny fitondram-panjakana tamin’ny talata teo, momba ny Raharaha « Villa Elisabeth ». Ny minisitry ny fanajariana ny tany, Benjamina Ramanantsoa sy ny minisitry ny vola, Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona, no niatrika ny mpanao gazety, nitondra ny hevitry ny governemanta.
Voalohany aloha dia samy nanadio tena ho samy tsy nahafantatra an’io raharaha io izy ireo, ary avy eo dia nilaza fa « nandray didim-pitondrana ny fanjakana ka nanafoana ny fifanaraham-barotra momba io Villa Elisabeth io ».
Raha ny fanindrian-dRamanantsoa Benjamina ny resaka dia « mihatra avy hatrany io didim-pitondrana io ».
Mazava izany fa hatreto dia naman’ny foana io fifampivarotana io. Izahay moa teto tamin’ny talata dia nivantana fa « fifampivarotana tamin’ny matoatoa no natao tamin’io raharaha io ». Ho anay dia naman’ny tsy manan-kery io fifampivarotana io ary ny varotra nataon’ilay nividy tany amboalohany dia tsy misy manan-kery araka ny lalàna avokoa.
Tokony hazava koa izay, raha tsy hoe manao «toky fitaka» ny fitondram-panjakana. Izany hoe « mody milaza fa foana ilay fifampivarotana nefa ny ara-panjakana rehetra any anivon’ny antontan-taratasy, mbola mitohy ny raharaha. »
Etsy ankilany, ndeha hoheverina fa foana ny fifampivarotana. Dia vitan’izay ve ny resaka ? Matoa mantsy nofoanana dia nisy fahadisoana tao fa tsy hoe noho ny ady hevitra saika tsy nanam-pitsaharana dia ndeha hofoanana.
Nisy tsy fanarahan-dalàna tao ary nisy rariny sy hitsiny voahitsakitsaka, ka havela fotsiny homba ny lasa ve izany ?
Izahay manokana dia tsy mankasitraka izany fifampiarovana hafahafa izany satria miendrika fifampiarovana ny fanafoanana fotsiny ny fifanaraham-pifampivarotana dia mangatsiatsiaka any ny tompon’antoka tamin’izy io. Indrindra fa hoe « fifampivarotana nahafeno ny fepetra araka ny lalàna », hono. Izahay manokana aloha dia mahita fa fandikan-dalàna, fanararaotam-pahefana, fanosihosena ny rariny, fanitsakitsahana ny fahamarinana no nenti-nivarotra an’io tanàna io. Aza hadinoina fa nisy ny fampiasana ny fahefam-panjakana tamin’ny fanaovana ny fifampivarotana ary nisy ny vola nifanarahana ho setrin’ny fifampivarotana. Dia havela ho vitavita fotsiny amin’izao ve izany ? Hita fototra rahateo fa nisy hosoka koa tao. Na ilay vondrom-barotra nambara fa nividy voalohany an’io tanàna io na ny sandan’ilay trano noraketina tao anatin’ny fifampivarotana dia nisy hosoka, nisy tsikombakomba maloto, nisy kolikoly… Io trano valo zoro (villa) io, miaraka amin’ny tokontany be izay mifefy tamboho ve dia varifitoventy no nambara an-taratasy fa vidiny nifanarahana ? Tsy maintsy ny mpiara-miombona antoka amin’ny fitondrana ao anatin’ny fitantanan-draharaham-panjakana na ao anatin’ny Hvm no tompon’antoka tamin’io matoa nitady irika hanafoanana fotsiny ny fifampivarotana ny fanjakana. Tsy azo hoeritreretin’ny saina ny hoe « olona any ivelan’ny fitondrana, ary ahatahoran’ny mpitondra ankehitriny amin’ny fifidianana ho avy na olona mikitikitika ny tombontsoan’izy samy mpitondra no tompon’antoka tamin’io. Dia hovitavitain’ny fitondram-panjakana fotsiny amin’izao ve ? sarotra inoana.
Ny hasin’ny fanajana ny tany tan-dalàna sy ny lanjan’ny mangarahara ary ny halehiben’ny rariny sy hitsiny dia mitaky amin’ny mpitondra fanjakana ankehitriny mba hamotopototra sy hanadihady ny momba io raharaha « Villa Elisabeth » io, ary hamantatra ny nandika lalàna sy nanitsakitsaka ny rariny sy ny fahamarinana, dia mampihatra ny lalàna amin’izay tompon’andraikitra momba izany. Tokony ampahafantarina ny ambanilanitra koa anefa ny tohin’ny raharaha rehetra fa tsy hatao salobokomana fotsiny.